Cape maka uwe mgbede
Ụmụ agbọghọ ndị nwere nlezianya pụrụ iche na-ahọrọ ejiji maka oge dị iche iche. Otú ọ dị, foto ahụ gwụchara agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na a họrọghị akpụkpọ ụkwụ , ọla ejiji na ụzọ edozi. Otu n'ime ngwa ndị dị mkpa bụ uwe mgbokwasị maka uwe mgbede. Nke a nke uwe ga-ekpo ọkụ n'oge mgbede ma mesie onyinyo ahụ ike.
Kedu otu esi eji akwa uwe eji akwa uwe?
Iji zere imehie mgbe ịzụrụ ngwa, gbalịa jiri uwe. Nke a na-eme ka ọ dịkwuoro gị mfe ịhọrọ ụdị akwa. Ọ bụrụ na ị dị nso na ụdị ahụ a kpochapụrụ, gbanwee ụdọ ka ụda dị. Nchikota a bara uru maka ihe omume mmadu. Ndị na-achọ ịnwale ma na-adọrọ mmasị ga-amasị okpu ndị dị iche na uwe na agba na ụdị. Uwa niile ga-abụ akwa mkpuchi na uwe.
Ịhọrọ akwa maka uwe ejiji ejiji na obere eriri, ị ga-enweta ọnọdụ nke onye nwere uto dị mma. Dịka iwu iwu ahụ si dị, otu akụkụ nke ahụ kwesịrị ịhapụ oghere: ụkwụ, azụ, obi.
E nwere ike iji uwe mgbede na-agbakwunye ọtụtụ ụdị uwe. Ihe niile dabere na ihe nlereanya na ụdị ekike. Ndị kasị ewu ewu bụ ihe ndị na-esonụ:
Bolero. Nke a bụ obere jaket na uwe aka. Ọ ka mma iji ejiji ejiji. Ọ dị mma, mgbe a na-eji ihe ahụ eji ejiji eji ejiji, ma ọ bụ dabara na ya na agba. Jaketị mara mma na lace ma ọ bụ ihe ndozi nke swan.
Uwe a kpara maka uwe mgbede. Ọ nwere ike ịbụ ịchafụ ọka, ịchafụ ma ọ bụ zuo ohi. A na-eji ejiji ndị na-adọrọ adọrọ na-ekpuchi ihe ndị a na-ekpuchi ya ma bụrụ ndị nwere ọnụ mma mara mma.
Boa. Nke a bụ ụfụfụ nke aji ma ọ bụ nku. A na-emechi aka n'olu ma ọ bụ tụba ya n'ubu. Ọ na - enwe ike ime ka uwe ahụ dịkwuo mma, na - aghọ aka ikpeazụ n'ile ihe oyiyi. A na-eyi ejiji a uwe na aka uwe ma na-enweghị ha, na-atụba ya n'otu ubu n'elu uwe.
Manto. Awe ejiji dị ka uwe na-adịghị ajị anụ. Enwere uwe na akwa aka. Manto dị ezigbo ọkụ, ya mere ọ na-ejikọta ya na uwe ya na mgbede oyi.
Ihe mgbokwasị dị nnọọ mma nye ndị na-emepụta ihe na ha na-ekwe ka uwe mgbede na-eji akwa sewn chiffon. Nke a na-azọpụta ndị inyom site na ogologo ọchụchọ maka ngwa.
Uwe na mkpọchi - ụdị ejiji kachasị mma na ihe ị ga-eyi?
Short jeans - ihe na-eyi na otú e si kee ihe oyiyi dị mma?
Ndị na-eji ezumike na-eme ihe n'oge okpomọkụ
Obere jaket - na ihe ị ga-eyi na otu esi eburu okpu na ịchafụ?
Ndị inyom na-akpa ákwà
Uwe ejiji na akwa
Ụmụ nwanyị na-eji ịnyịnya ígwè
Akpụkpọ ụkwụ egwuregwu ụmụ nwanyị
Nwee uwe maka ụmụ agbọghọ
Chanel etemeete mkpokọta - Summer 2016
Ude maka achicha ara ehi na bred - a na - eme ngwa ngwa ma dị mfe maka nchịkọta zuru ezu nke eji megharịa ọnụ
T-uwe elu mara mma
Na-agụ akwụkwọ claret ụlọ akwụkwọ
Borscht, dị ka ụlọ akwụkwọ ọta akara
N'uzo uzo nke refrjiraeto
Ebere jaket na aji mkpuchi
Pilates: usoro ihe omume
Eji ígwè rụọ
Ntugharị nkedo maka mbọ
Uru nke mịrị
Dermatitis na ihu - ọgwụgwọ
Kwa ọnwa mgbe ha dị ime - gịnị ka ha bụ?
Osikapa na ugu - uzommeputa
Mkpali nke obi
Terrarium maka ala
Ịgba afa site na March 8
Ọnụ ụzọ nke ime ụlọ nke aka ha
Kedu ihe a na-ahụ anya na gịnị kpatara ya?
Kedu ihe bụ vitamin na mmanụ azụ?